किन टाउकोमा चाया पर्छ ? मुख्य ५ कारण यस्ता छन्, जानी राखौँ – mero sathi tv
On १ मंसिर २०७४, शुक्रबार ०८:३०
बदलिँदो मौसममा कपाल झर्नु र टाउकोमा चाया पर्नु एक सामान्य समस्या बनिसकेको छ । वर्तमान जीवनशैलीमा ८० प्रतिशत मानिसको टाउकोमा चायाको समस्या देखिएको छ । विशेषगरी जाडो मौसममा तालु रुखो हुँदा चाया पर्ने समस्या चाँडो देखिन्छ । यदि बढी चाया पर्ने समस्या रहेमा अरू मानिसका अगाडि लाजमर्दो अवस्था सिर्जना हुने, आत्मविश्वास कम हुने र आत्मबल कमजोर हुने जस्ता समस्याबाट चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
टाउकोमा चाया पर्ने ५ मुख्य कारण १-जाडो मौसममा तातो पानीको प्रयोग जाडो मौसममा टाउकोमा चायाको बढी असर देखापर्छ । जाडो मौसममा तातो पानीले नुहाउँदा टाउकोको त्वचा बढी रुखो हुन्छ, जसको कारणले टाउकोमा चायाको समस्या उत्पन्न हुन्छ । यसको साथै जाडो मौसममा टाउकोमा गलबन्दी र टोपी लगाउँदा टाउकोलाई प्रयाप्त हावा प्राप्त हुँदैन, जसको कारण टाउकोमा चाया बढ्छ । २-हार्ड श्याम्पूको प्रयोग हार्ड श्याम्पूको प्रयोगले पनि कपालमा चायाको समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ । दिनहुँ श्याम्पू परिवर्तन गर्नु र केमिकल युक्त श्याम्पूको प्रयोगले टाउकोको त्वचामा असर पर्छ, जसको कारणले चायाको समस्या उत्पन्न हुन्छ । बजारमा विभिन्न किसिमको श्याम्पू उपलब्ध छन्, यसकारण चायाको समस्याले चिन्तित व्यक्तिले माइल्ड र हर्बल श्याम्पूमा विश्वास राख्नुपर्दछ । ३-ओयली कपाल टाउकोमा तेल रहँदा टाउकोको त्वचा चिल्लो हुन्छ, जसको कारणले कपालमा फोहोर जम्मा हुन्छ र यहीँ फोहोरले नै चायाको समस्या निम्त्याउँछ । यो फोहोरको कारणले कपाल झर्न शुरू हुन्छ । यति मात्र नभई अस्वस्थकर आहारको कारणले पनि कपाल ओयली हुन्छ, जसको कारणले कपालमा चायाको समस्या उत्पन्न हुन्छ । ४-थायराइडको समस्या जो मानिसलाई थायराइडको समस्या हुन्छ, उनीहरू चायाको समस्याबाट बढी ग्रसित हुने गर्दछन् । थायराइडको समस्या हुँदा टाउकोको त्वचा रुखो हुन्छ र कपाल झर्न थाल्छ । टाउकोको रुखो त्वचामा चाया चाँडो फैलिन्छ । ५-वर्षायाम वर्षायाममा पनि टाउकोमा चाया पर्नसक्ने खतरा बढ्छ किनकि यस अवधिमा भिजेको कपालमा चिस्यान रहिरहन्छ र यस अवधिमा पानी टाउको जाँदा चिल्लोपन बढ्छ । यस चिल्लोपनको कारणले चायाको खतरा बढ्छ । वर्षायाममा पानी टाउकोमा जाँदा किटाणुहरूको खतरा पनि रहन्छ, जसले चायाको समस्या मात्र नभई अन्य रोगहरू उत्पन्न हुनसक्ने खतरा पनि बढ्छ ।
कुखुराको मासु धोएर पकाउने गर्नुभएको छ ? फैलिन सक्छ यस्तो खतरनाक रोग